विदेशी लगानीका उद्योग बढे, लगानी कति आयो ? (भिडियो रिपोर्ट) - Karobar National Economic Daily
विदेशी लगानीका उद्योग बढे, लगानी कति आयो ? (भिडियो रिपोर्ट)
query_builderJune 16, 2017 8:33 AM supervisor_accountरोशन थापा/मंगल तामाङ visibility2201
११ महिनामा विदेशी लगानीका ३ सय ४३ उद्योग दर्ता
नेपालमा स्वदेशीभन्दा विदेशी लगानीकर्ता उद्योग संचालन गर्न आकर्षित भएको देखिएको छ ।सरकारी तथ्यांकले नै स्वदेशीभन्दा विदेशी लगानीकर्ता उद्योग खोल्न आकर्षित भएको देखाएको हो ।
उद्योग विभागमा चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता जेठ मसान्तसम्म ४ सय ४६ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । ती मध्ये ३ सय ४३ वटा उद्योग विदेशी लगानीका हुन् । विभागमा ११ महिनामा साना २ सय ८०, मझौला ७६ र ठूला ९० वटा उद्योग दर्ता भएकामा ३ सय १९ साना, १५ मझौला र ९ ठूला उद्योग विदेशी लगानीका भएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।
दर्ता भएका विदेशी उद्योगले १३ अर्ब ६७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विभागले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न भन्दै गएको माघ २ गते अनलाइनमार्फत उद्योगको दर्ता गर्न सुरु गरेको थियो । अनलाइन सेवाको व्यवस्थायता १ सय ५४ वटा विदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । तिनमा साना उद्योगको संख्या १ सय ४८ छ ।
विभागमा हालसम्म ६ हजार ९ सय ४१ उद्योग दर्ता भएकामा वैदेशिक लगानीका उद्योगको संख्या ४ हजार छ । विभागका महानिर्देशक शंकर अर्यालले विदेशी लगानीकर्ताहरु खासगरी सेवाक्षेत्र र पर्यटनतर्फ बढी आकर्षित देखिएको जानकारी दिए ।
विदेशी लगानीकर्ताले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सेवा क्षेत्रतर्फ १ सय ३९, पर्यटनतर्फ १ सय २९ र उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ ५० वटा उद्योग दर्ता गराएका छन् । यद्यपि सेवा क्षेत्रमा भन्दा पर्यटन क्षेत्रमा बढी लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
सेवा क्षेत्रका उद्योगमा ४ अर्ब ४७ करोड ६४ लाखको प्रतिबद्धता जनाएका विदेशी लगानीकर्ताले विभागबाट पर्यटन क्षेत्रमा ५ अर्ब ५१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ लगानीको स्वीकृति लिएका छन् ।
सरकारले गत फागुनको तेस्रो साता गरेको लगानी सम्मेलनमा २१ देशका लगानीकर्ताले नेपालमा १४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका विदेशी लगानीकर्तालाई ल्याउन लगानीको सुरक्षा र मुनाफा आर्जनको सुनिश्चित गर्नुपर्ने उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
उद्योग उद्योग विभाग विदेशी लगानीकर्ता